Ukucinga ngengqondo 101: Imigaqo yokuPhathwa kwengqondo | Martech Zone
Ukucinga ngengqondo 101: Imigaqo yokucinga
NgoMgqibelo, Matshi 30, 2013 NgoMgqibelo, Matshi 30, 2013 Douglas Karr
Kutshanje sityikitye ingxelo ye-intanethi ye Mindjet, Umxhasi wethu kunye netekhnoloji exhasa iMartech. Bano Iipesenti ezingama-25 zikhutshiwe ngokukodwa ebalekayo ngempelaveki! Ndimtsha ngokucinga ngemeko kwaye ndafumana umbono ocacileyo ekwabelwana ngawo Iimephu zoko zibonisa imigaqo-nkqubo yokucinga.
Into endiyixabisa kakhulu malunga nokwenza imephu kukuba ndinokuzicwangcisa ngokukhawuleza iingcinga zam ngendlela enesigqeba ukuya kuthi ga kwinqanaba eligqibeleleyo leenkcukacha. Le mindmap ihamba ngokuba kutheni abantu besebenzisa iimephu zengqondo kunye nendlela abaluncedo ngayo kuzo zombini iingqondo zangasekhohlo nasekunene, ukuba ungaqala njani ukuyila imephu yakho yengqondo kunye nendlela yokusebenzisa zonke izixhobo zokwahlula isebe ngalinye, izihloko, umxholo kunye nezenzo. I-Mindjet ikwavumela ukuba unxibelelanise amasebe, ukongeza imisebenzi, kunye nokwabelana kunye nokusebenzisana namalungu eqela.
Kwimizamo yethu yokuthengisa, sisebenzise iingqondo zokucinga, uhambise uphando lwamagama aphambili, ucwangcise imikhankaso, uphuhlise amanqaku esoftware, kwaye ubhale phantsi ukuba ishishini lethu lisebenza njani lilonke. Itekhnoloji yokulutha-ukugcina ixesha kunye nokuphuhlisa iimephu ezichaza ngokucacileyo nangokucocekileyo izicwangciso zakho okanye iinkqubo.
Nantsi isiqalo sevidiyo esikhawulezayo sendlela abantu abasebenzisa ngayo iMindjet ukuphuhlisa iingqondo:
tags: indlela yokwenza imephuMindjetimephu engqondweniukucingaimigaqo-siseko yokucinga
I-Rock Media yezeNtlalontle kwimizuzu engama-30 ngosuku
Uphando: Ngaba Ukuqokelela okanye Ukuzibandakanya Kubaluleke ngakumbi?